मोबाइल इन्टरनेट डाटा छिट्टै सकिए के गर्ने ? यस्ता छन् डाटा बचाउने पाँच तरिका « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
मोबाइल इन्टरनेट डाटा छिट्टै सकिए के गर्ने ? यस्ता छन् डाटा बचाउने पाँच तरिका
९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:३३
काठमाडौं । धेरै कम मानिसहरूलाई मात्र थाहा छ कि हामी मोबाइललाई राम्रोसँग प्रयोग गरेर धेरै डाटा बचत गर्न सक्दछौं। हो, यदि हामीले छिटै डाटा सकिने कारणहरू पत्ता लगायौं भने राम्रोसँग इन्टरनेट प्रयोग गरेर, मोबाइलमा धेरै डाटा बचत गर्न सकिन्छ।
स्मार्ट तरीका जसले एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा डाटा बचत गर्न सकिन्छ
३ कम रिजोलुसनको भिडियोः अनलाइन भिडियोको चलन निकै बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी भिडियोको रिजोलुसन उच्च वा कम छ कि छैन हेर्दैनौं। एचडी रिजोलुसन भिडियोहरूले धेरै डाटा खान्छन्।
यसैले तपाइँले यी भिडियोहरूलाई वाईफाईमा मात्र चल्नेगरि एपको सेटिङ सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यसले जब मोबाइल डाटामा भिडियो स्ट्रिम गर्दै हेर्नुहुन्छ यसले कम रिजोलुसनको भिडियोहरू मात्र देखाउँदछ । यूट्यूबमा यो सुविधा छ। धेरै ब्राउजरसँग तस्विर र भिडियोलाई कम रिजोलुसनमा सेट गर्ने विकल्प पनि हुन्छन्।
५ वेबएप कलिङ्गबाट बच्नुहोस्ः प्रायः मानिसहरू साधारण कलिङ्गको सट्टा वेब कलिङ्ग गर्छन्। यी कलिङ्ग सेवाहरू अधिक महँगो हुन्छन्। यस अवस्थामा, यदि तपाईँले सामान्य मोबाइल नेटवर्क कलिङ्गमा सहारा लिनुभयो भने यो उत्तम हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कलिममा तपाई वेब एपबाट कल गरेर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यदि त्यहाँ वाईफाई छ भने मात्र तपाइँ वेबकल्सको सपोर्ट लिनुहोस् । साभार –technologykhabar.com
अनुमति नलिई दुरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगर्न प्राधिकरणको आग्रह
सुदूरपश्चिमका ७ जिल्ला सञ्चारबिहीन